विहीबार, असार २५, २०७७
नेकपाको कलहमा बन्धक बन्यो देश
सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दुर्भाग्यपूर्णः संयुक्त नागरिक समूह
भारतीय न्यूज च्यानलहरु नेपालमा रोक्ने निर्णय
नेपालमा १०० मध्ये ४० जनाले गर्छन् मदिरापान
नेकपा दोस्रो तहका नेताहरुको आग्रहः धर्ना जुलुस रोकौं
संयुक्त राष्ट्रसंघमा तीन दर्जन द्वन्द्वपीडित संस्थाको याचना- ‘व्यग्रताका साथ न्याय पर्खिरहेका छौं’
सरकारले विश्व ब्यांक र एडीबीसँग रु. ७८ अर्ब ऋण लिंदै
टिप्पणी मंगलबार, जेठ ८, २०७५
दक्षिणएशियामा चीनको प्रभावले चिन्तित भारत नेपालसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध रिसेट अर्थात् पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ ।
छिमेकी पहिलो’ परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न यतिबेला भारतमा ‘इन्गेजमेन्ट’ र ‘रिसेट’ शब्दावलीको प्रयोग बढेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण (२८–२९ वैशाख) पनि नेपाल सम्बन्ध ‘रिसेट’ गर्ने अभिप्राय अन्तर्गत नै भएको भारतीय विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
छिमेकी राष्ट्रहरूमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिन नै भारतले ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अवलम्बन गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । चार वर्षे शासन अवधिमा मोदी दक्षिणएशिया नीतिमा असफल तर बाँकी राष्ट्रमा सफल भएको तर्क गरिन्छ । त्यसैले पनि ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा साउथब्लक (भारतीय विदेश मन्त्रालय) सक्रिय छ ।
यसका लागि चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ निर्णायक भएको निष्कर्षका साथ वैशाख १४–१५ मा मोदी चीन पुगे । भ्रमणमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र मोदीबीच अनौपचारिक शिखर वार्ता भयो । नेपालमा भने उनले मधेशमा ‘सीता’ र पहाडमा ‘शेर्पा’ को गुणगान गाए ।
‘इन्गेजमेन्ट’ र ‘रिसेट’ भारतको चाहनाभन्दा बढी बाध्यता हो । उदाहरणका लागि गत वर्ष दोक्लाममा जस्तै भारत–चीन सैन्य तनाव हुन नदिन, चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र दक्षिणएशियामा चीनको आक्रामक उपस्थिति कम गर्न पनि भारत चीनसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ मा बस्नु परेको हो ।
आफ्नो पुरानो प्रभाव क्षेत्रलाई चीनको पोल्टाबाट फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासमा लिई नेपाल नीति ‘रिसेट’ गर्ने सोच मोदीले बनाएका हुनसक्छन् । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल चीनसँग नजिकिएको थियो ।
भारतको नेपाल नीति ‘रिसेट’ हुनुको अर्थ हो, उसले पूर्ण रूपमा नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नु, आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्नु । नेपालीजनमा भारतको छवि राम्रो बनाउने हो भने नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नुपर्ने संस्थापन इतर भारतीय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ ।
आफ्नो पछिल्लो भ्रमणमा मोदीले हस्तक्षेपकारी रवैया नदेखाएबाट भारत साँच्चै सम्बन्धको ‘रिसेट’ चाहिरहेको छनक पनि मिल्छ । तथापि नेपालका केही पूर्व कूटनीतिज्ञहरू भारतको नेपाल नीति रिसेट नभई ‘इन्गेजमेन्ट’ कै अवस्थामा भएको धारणा राख्दछन् । जे भनिए पनि भारतको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आएको चाहिं पक्कै हो ।
मोदीको नेपाल नीति ‘रिसेट’ को जस चाहिं प्रम ओलीलाई नै जान्छ । ओलीले नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा चीनलाई उभ्याउने आँट गरे । यसैको पृष्ठभूमिमा ८ चैत २०७२ मा चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झाैता गरे । यता मोदीसामु पनि नेपालका आवश्यकता, प्राथमिकता र समस्या प्रष्ट रूपमा राखे । उनले नेपालमा भारतीय विकास सहयोग निर्माणको प्रगति धिमा भएको बताए । आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखिंदा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने भयबाट ओली मुक्त देखिए ।
भारतको नेपाल नीति ‘रिसेट’ हुनु ‘नेहरू डक्ट्रिन’ को औचित्य सकिनु पनि हो । नेपालमा कसै गरे पनि चीनको प्रभाव विस्तार हुन नदिने नेहरू डक्ट्रिनको सार हो । तर, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेहरू विचार जप्नेहरूकै जगजगी भएकाले मोदीको ‘रिसेट’ नीति लागू गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यही चुनौती महसूस गरी ओली भारतसँग राजनीतिक तहमै ‘डिल’ गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
बदलिंदो भूराजनीतिक सम्बन्धका कारण पनि भारतले नेहरू डक्ट्रिनमा पुनर्विचार नगरी धर छैन । किन पनि भने, भारतको हस्तक्षेपकारी नीतिविरुद्ध चीन यतिबेला ‘डिटरेन्ट’ शक्तिको रूपमा उपस्थित हुन थालेको छ ।
भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध उभिने र विकल्प खोज्नेलाई साथ दिने चीन नीतिको पछिल्लो उदाहरण माल्दिभ्स र नेपाल हुन् । माल्दिभ्समा केही महीना अगाडि अदालती ‘कु’ हुँदा चीनले भारतलाई सैनिक हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दियो । त्यसैले पनि हुनसक्छ, दक्षिणएशियामा भारतको हस्तक्षेप विरुद्ध चीनको आड खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
विहीबार, असार २५, २०७७ नेकपाको कलहमा बन्धक बन्यो देश
विहीबार, असार २५, २०७७ सत्ताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा दुर्भाग्यपूर्णः संयुक्त नागरिक समूह
विहीबार, असार २५, २०७७ यसरी गरि‌ंदैछ एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कन, नतिजाप्रति विद्यार्थी सशंकित
विहीबार, असार २५, २०७७ भारतीय न्यूज च्यानलहरु नेपालमा रोक्ने निर्णय
रिपोर्ट कोरोनाले खाइदियो विपद् व्यवस्थापनको ३ अर्ब !
टिप्पणी भारत–चीनकाे गस्ती–कुस्ती र अलमलिएको हाम्रो विदेश नीति